ကုန်တင်ယာဉ် ဖြတ်သန်းစဉ် ကျိုးကျခဲ့သော ဝိုင်းမော်-ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီးလမ်းရှိ ဘေလီတံတားအနီး၌ ? - Yangon Media Group
ကုန်တင်ယာဉ် ဖြတ်သန်းစဉ် ကျိုးကျခဲ့သော ဝိုင်းမော်-ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီးလမ်းရှိ ဘေလီတံတားအနီး၌ ?
မြင်းခြံ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
သတ္ထုကုန်ကြမ်းများ တင်ဆောင်လာသော ၁၂ဘီးယာဉ်ကြီးဖြတ်သန်း၍ ကျိုးကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်-ဆဒုံးကန်ပိုက်တီးလမ်းပေါ်ရှိ ဘေလီတံတားကျိုးကျမှု ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ရာနေရာအနီး၌ ယာယီတံတားကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ၁၃တန်အောက် မော်တော်ယာဉ်များ စတင်ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါယာယီတံတားကို ပြည်နယ်တံတားဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ထိန်မိန်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း၍ H 20 သံပေါင်များဖြင့် သုံးရက်အတွင်း ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ၁၃တန် အောက်ကုန်တင်ယာဉ်များသွားလာခွင့်ပြုနေပြီး ၁၃ တန်အထက်ယာဉ်များကို သွား လာဖြတ်သန်းခွင့်မပြုကြောင်း သိရသည်။
”ကျိုးသွားတဲ့တံတားနေရာကို တရုတ်ထိန်မိန်ကုမ္ပဏီကနေ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ တိုင်းထွာဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလမ်းဦးစီးက ပညာရှင်တွေကူညီကြည့်ရှုပေးရုံပါပဲ။ သူတို့ တရုတ်ဘက်က ဒီတံတားကြီးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတံတားကို တည်ဆောက်ပြီးရင်လည်း အရင်လိုတန်ပိုယာဉ်ကြီးတွေ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ အဓိကဖြတ်သန်းသွား လာနေတာကတော့ ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစ်သျှူးငှက်ပျောကားနဲ့ သတ္တုကားတွေအများဆုံးပါပဲ”ဟု ပြည်နယ် လမ်းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းမြင့်ဦးက ပြောကြားသည်။ ယခုကျိုးကျသွားသော တံတားနေရာတွင် တံတားအသစ်အား တရုတ်နိုင်ငံမှ ထိန်မိန်ကုမ္ပဏီကတစ်လခွဲအတွင်း ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် စာရင်းပေးထားမှု ကိုးသိန်းနီးပါး ရှိသော်လည်း ငါးသောင်းဝန?
ကလေးမြို့ စက်ဘီးစီးအဖွဲ့ ချင်းပြည်နယ် ဝေဘူလတောင်သို့ ဒုတိယအကြိမ် စီးနင်း တက်ရောက်မည်
ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်လာသည့် ငါးသန်းမြောက် ခရီးသည်ကို ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင်